Kelly Stables sy David Cowgill handray ny loka MPSE Golden Reel isan-taona 68 | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Kelly Stables sy David Cowgill handray ny loka MPSE Golden Reel isan-taona faha 68th
Kelly Stables sy David Cowgill handray ny loka MPSE Golden Reel isan-taona faha 68th
Lanonana virtoaly iraisam-pirenena natokana ho an'ny 16 aprilyth.
Studio City, Kalifornia — Mpandray anjara feo malaza Kelly Stables sy David Cowgill no handray ny 68th Loka MPSE Golden Reel isan-taona. Stables sy Cowgill dia hanatevin-daharana ireo mpanolotra erak'izao tontolo izao amin'ny fanomezam-boninahitra zava-bita miavaka amin'ny fanitsiana feo amin'ny sokajy 22, sary mihetsika, fahitalavitra, sary mihetsika, fialamboly amin'ny solosaina, ary asan'ny mpianatra. Ny lanonana fankalazana virtoaly rehetra amin'ity taona ity dia hatao amin'ny zoma 16 aprily 2021 amin'ny 6:00 hariva PDT. Azo vidiana tapakila eto: www.mpse.org/event-4193991
"Faly izahay manana an'i Kelly sy David ho mpampiantrano ny Golden Reel Awards amin'ity taona ity," hoy ny filohan'ny MPSE Mark Lanza. “Amin'ny maha mpisehatra am-peo azy ireo dia manana fahitana tsy manam-paharoa amin'ny tontolon'ny feo fialamboly izy ireo. Hanolotra hatsikana sy fientanentanana amin'ny alina miavaka izy ireo rehefa mankalaza ny asa-tanantsika izahay. ”
Ny asan'ny feon-tsofina dia misy ny andian-tsarimihetsika ho an'ny ankizy Doc McStuffins, Sofia ny voalohany, ary Adventures any Odyssey. Niseho tamin'ny fakan-tsary tao izy Superstore, Lehilahy roa sy sasany, Olana sarotra tanterahina, ary The Exes. Cowgill dia nizara ny feony tamin'ny sarimihetsika an-jatony sy fandaharana amin'ny fahitalavitra anisany Frozen II, The Angry Birds Movie 2, Fampakaram-bady tena sordid, Hotel Transylvania 2, ary Minion.
“Tsy hadino indrindra ny Loka Golden Reels tamin'ity taona ity,” hoy i Stables. “Nandritra ny fanamby rehetra tamin'ny taon-dasa, ny mpanakanto mahay dia nanohy nametraka ny fony sy ny fanahin'izy ireo tamina tetikasa manerana ny haino aman-jery fialamboly rehetra. Mahafinaritra ny mandray anjara amin'ny fanajana ny fanoloran-tenany. ”
Mampanantena i Cowgill fa ho feno fihomehezana sy tsy ampoizina ny lanonana virtoaly. "Ny endrika virtoaly dia ahafahantsika mampiaraka ny olona manerana ny tany," hoy izy nanamarika. “Ho fotoana mahafinaritra izao. Tsy afaka miandry aho. ”
Ny mari-pankasitrahana ho an'ny isam-batan'olona dia hatolotry ny matihanina mahay mivoaka avy any Aostralia, Sina, Mexico, India, Russia, ary Kalifornia atsimo. Anisan'izany ny:
Aostralia: Animation & Documentary
Wayne Pashley (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Libby Villa (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Derryn Pasquill (Dialogeran'ny Supervising / ADR)
Sina: Fitaovana amin'ny solosaina, tsy fanaovana teatra na vahiny
Jianxi Zhang (Mpandrindra Sound Post)
Yang Jiang (Tonian'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso)
Zhao Nan (Mpanara-maso ny feo manara-maso)
Meksika: endrika mivantana fohy sy haino aman-jery Episodic Broadcast
Jaime Baksht (Mixer-Recorder Mixer)
Michelle Couttolenc (Mixer-refa mifangaro)
Javier Umpierrez (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Los Angeles (UCLA): Mpianatra mpanatontosa sarimihetsika
Brian Slack (Senior Manager / Professional Audio, DTS / Xperi, Mixer / injenieran'ny re-record)
Bernard Weiser (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Nancy Cartwright (mpilalao sarimihetsika amin'ny feo)
India: endrika fampisehoana tokana sy fampielezam-peo Episodika lava
Baylon Fonseca (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Karan Singh (Mpanara-maso Editorie / Mpanakanto Foley)
Vijay Rathinam (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Russia: Sarimihetsika mampiavaka
Aleksey Sinitsyn (Fanaraha-maso ny famoahana feo)
Dmitriy Kliminov (Mpanoratra Re-Recorder)
Noforonina tamin'ny 1953, ny Motion Picture Sound Editors dia fikambanana tsy maka tombony amin'ny mpamoaka feo sy mozika matihanina miasa ao amin'ny fahitalavitra sy ny indostrian'ny gaming. Ny iraka ataon'ilay fikambanana dia manome fahalalana maro avy amin'ireo matihanina nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny vondron'olona, ​​tanora ary matihanina amin'ny sehatra; Fanolorana sy fanabeazana ny fiarahamonina momba ny fahamendrehana ara-kanto sy fandrosoana ara-teknika amin'ny fanoratana feo sy mozika; Manome vatsim-pianarana ho fampiroboroboana ny feon'ny sary mihetsika amin'ny fampianarana; Ary manampy amin'ny fanatsarana ny fiainana manokana sy matihanina amin'ny lehilahy sy vehivavy izay mampihatra io fiara tsy manam-paharoa io.
Awards Golden Reel Awards mpse feo 2021-04-02
Previous: Ny horonantsary "Neo-Bedouin" an'ny HPA dia mampiasa URSA Mini Pro 12K
Next: Mpanadihady mpanao famotorana